လပေါ်နှင့် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ် လူ လွှတ်ရန် ညွှန်ကြားချက်ကို ထရမ့်လက်မှတ်ထိုး
WASHINGTON, DC - JANUARY 23: (AFP OUT) U.S. President Donald Trump signs the last of three Executive Orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC on Monday, January 23, 2017. These concerned the withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership (TPP),aUS Government hiring freeze for all departments but the military, and "Mexico City" which bans federal funding of abortions overseas. (Photo by Ron Sachs - Pool/Getty Images) 694681111
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် လပေါ်နှင့် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ် လူဆက်လွှတ်ရန် ညွှန်ကြားသော ညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ကို ပြီးခဲ့သည့်အပတ် တနင်္လာနေ့က လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယခုတစ်ကြိမ်တွင် လပေါ်ခြေချရုံ အလံထောင်ရုံတင်မကဘဲ မားစ်ဂြိဟ် အထိပါ ခြေဆန့်ရန်၊ တစ်နေ့နေ့တွင် အခြားသော ဂြိုဟ်များအထိ သွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ထရမ့်ကဆိုသည်။
သို့သော် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို့လုပ်မည်ဆိုသည်ကိုမူ အတိ အကျမပြောခဲ့ပေ။ Space Policy Directive 1 ဟု ခေါ်သော အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်မှာ National Space Council ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကောင်စီကို သမ္မတ ဂျော့ ဘွတ်ရှ်လက်ထက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သမ္မတဘီလ်ကလင်တန် လက်ထက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ယင်း ကောင်စီကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။
ယခုညွှန်ကြားချက်သည် သမ်္မတ ဂျော့ဘွတ်ရှ်၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ် သော ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် လပေါ်သို့ လွှတ်ရန်၊ ထို့နောက် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ် သို့လွှတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက် လုပ်ဆောင် သော Constellation Program ကို ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေသည်။ ထိုအစီအမံမှာ အိုဘားမားလက်ထက် တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ဥက်္ကာပျံများပေါ် သို့ စေလွှတ်ရန် အစီအမံများလုပ် ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါအစီအမံများ ကို ထရမ့်က ပယ်ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။
National Space Councilကို ဦးဆောင်နေသော သမ္မတထရမ့်နှင့် ဒုသမ္မတ မိုက်ခ်ပန့်စ်တို့သည် လူလိုက် ပါသော အာကသယာဉ် လပေါ်သို့ စေလွှတ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း မကြာမကြာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့က အခမ်း အနားမှာ လပေါ်သို့ နောက်ဆုံး စေလွှတ်ခဲ့သော Apollo 17အာကာ သယာဉ် လပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့သည် မှာ ၄၅ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နှင့် လည်းတိုက်ဆိုင်နေခဲ့သည်။
ယခင်ဆောင်းပါး၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ရုပ်/သံ သတင်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးနိုင်ငံပိုင် ဓာတ်ဆီဆိုင်များကို ပုဂလိကသို့ ရောင်းချထားမှု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ကိုင်တွယ်နေ